युवती भन्छिन्– ‘म भूतसँग प्रेम गर्छु, २० वटा भूतसँग सेक्स पनि गरें’ – Saurahaonline.com
युवती भन्छिन्– ‘म भूतसँग प्रेम गर्छु, २० वटा भूतसँग सेक्स पनि गरें’
एजेन्सी : के मानिसले भूत–प्रेतसँग प्रेम गर्न सक्छ ? अझै शारीरिक सम्बन्ध नै राख्न सक्छ ? यो हुनै नसक्ने कुरा जस्तो लाग्छ ।
तर, बेलायतमा एक महिला भने भूतसँग प्रेममा परेकी छन् । हुँदाहुँदा उनी भूतको प्रेममा यतिसम्म परेकी छन् कि, उनी भूतसँग यौन सम्पर्क राखेर बच्चा नै जन्माउन चाहन्छिन् ।
ती महिलाको नाम एमथिस्ट रिल्म हो । खबरमा बताइएअनुसार उनी एउटा भूतसँग वास्तवमै प्रेममा परेकी छन् । यो अरूको भनाइ हैन, ती नै महिलाको दाबी हो ।
खबरमा उल्लेख भएअनुसार ती युवतीको प्रेमकहानी निकै रोचक रहेको छ । उनको जीवनमा भूतले प्रवेश पाउनुअघि उनका एकजना प्रेमी थिए । उनले आफ्नो प्रेमीसँग इन्गेजमेन्टसमेत गरिसकेकी थिइन् । उनीहरू चाँडै बिहे गर्नेवाला थिए । उनका प्रेमी अक्सर घरबाहिरै रहन्थे ।
सोहीक्रममा ती युवतीको जीवनमा भूतको इन्ट्री भयो । त्यो पनि, नयाँ प्रेमी बनेर भूत आएको थियो । तब ती युवतीले भूतसँग यौनसम्पर्क गर्नकै लागि आफ्नो प्रेमीलाई वास्ता नगरी छाडिदिइन् ।
रिल्मको दाबी यो छ कि, पछिल्ला ११ वर्षदेखि उनी विभिन्न २० खाले भूतसँग नजिकिएकी छन् । उनी भन्छिन्– ‘मलाई भूतसँग समय बिताउन औधी मन पर्छ, जति मानिससँग बिताउन मज्जा आउँदैन ।’
खबरअनुसार ६ महिनाअघि रिल्म अस्ट्रेलिया भ्रमणमा गएकी थिइन् । तब त्यहाँ पनि उनले नयाँ भूत पाइन् । त्यो भूतसँग उनको गहिरो प्रेम बस्यो । अहिले उनी यो दाबी गछिन् कि, उनले आफ्नो भूत प्रेमीसँग निकै खुसीसाथ प्रेमी गरिरहेकी छन् ।
ती युवतीका अनुसार उनले आफ्नो भूत प्रेमीलाई देख्न भने सक्दिनन् । उनले खाली अनुभूत मात्रै गर्ने हो । उनी प्रेम पनि अनुभूतिमै गर्छिन्, सेक्स पनि अनभूतिमै ।
रिल्मले यो दाबी गरेकी छन् कि, उनले हालसम्म २० जना भूतासँग यौनसम्र्पक गरेकी छन् । उनले त भूतसँगको सेक्स मानिससँगको भन्दा पनि आनन्दायी हुने दाबी गरेकी छन् । निकट भविष्यमै उनी भूतको सम्भोगबाट बच्चा जन्माउन चाहन्छिन् ।